Ezinye iindlela zokufumana kwakhona i-MBR kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Akukho mntu unokuze acinge ukuba icandelo le ii-byte ezingama-512 kuphela ziya kuba lilitye lembombo kuyo yonke inkqubo yokusebenza Kwikhompyuter yakho. Eli candelo lilo eliyalela ukuba kuqale iiWindows, kuba kukho ulwazi lwesahlulelo ngasinye, imeko yaso kunye nolwazi lwediski enzima.
Ukuba i-malware okanye olunye uhlobo lwento lonakalisa eli candelo, Inkqubo yokusebenza yeWindows ayizukuqala, unika umyalezo apho umsebenzisi esazi ukuba inkqubo yokusebenza ayikho. Kukho iindlela ezizezinye esinokuthi sizisebenzise ukubuyisa le MBR, eya kuthi ixhomekeke ikakhulu kuhlobo lwenkqubo yokusebenza esinayo.
Ukulungisa icandelo le-MBR kwiWindows 7 kunye neenguqulelo kamva
KwiWindows 7 kunokwenzeka ukuba wenze "idiski yokuqalisa", efikelela ukufumana eli candelo libalulekileyo iya isiba mandundu kwinqanaba elithile. Imeko efanayo yile yenzeka kwiinguqulelo zeWindows 8.1 nangona, kolu hlaziyo lwenkqubo yokusebenza kusetyenziswa i-pendrive ye-USB. Ukuba unayo inkqubo yeWindows XP oyifunayo yenza ukhuphelo yayo nayiphi na inkqubo yokuyifumana kwakhona nangaliphi na ixesha lentlekele. Nokuba luphi uhlobo lwenkqubo yokusebenza onayo ngoku, apha ngezantsi siza kuchaza ezinye iindlela onokuzisebenzisa ngokulula.
Ngaphandle kwento yokuba olu khetho luzelwe njengesixhobo esincinci ekufuneka senziwe ngoncedo lwesiphelo sendlela, ngoku kukho uhlobo oluphambili, olunonxibelelwano olusebenzayo lwenza izinto zibe lula xa kubuyiselwa i-MBR elahlekileyo.
Kukho iimeko ezithile ukuze ukwazi ukusebenzisa le misebenzi, kuba umsebenzisi bekuya kufuneka ngaphambili gcina ukhuphelo lwelo candelo yexesha elizayo, yiphinde uyifumane ngesixhobo esinye kwimeko yokuba ilahlekile okanye yonakele.
Esi sixhobo sinokusebenza ngokufanayo kuleya besiyichazile ngaphambili; Oku kuthetha ukuba umsebenzisi kufuneka enze ikopi ekhuselekileyo yeli candelo le-MBR, eliya kuthi lincede ukuba alifumane ngokulula kwimeko yokonakala.
Isixhobo sisebenza kwi-DOS, ukusuka apho kukho ujongano oluya kusinceda sikwazi ukwenza le backup, sibuyisele i-MBR esekwe kuyo kwaye, ukuqinisekisa imeko ye-boot loader. Ngaphandle koku, ngesi sixhobo unokufikelela kwi hlela itafile yokwahlula okanye ukususa indawo engenanto ngaphakathi kwehard drive. Ukuyisebenzisa kufuneka uyitshise kwidiski yediski (kunzima kakhulu kwezi ntsuku) okanye kwidiski yeCD-ROM eqalekayo.
3. IH HDHacker
Ngokungafaniyo nezinye iindlela zangaphambili, ngesi sicelo ungalawula icandelo le-boot ngendlela elula ngenxa yokunxibelelana okunobuhlobo nomsebenzisi onako.
Ukusuka apho kunokwenzeka ukuba ufunde ugcino lwangaphambili olwenziwe; Ungajonga amaxabiso asisiseko kwisikrini esikubeke phezulu, apho Isixhobo sijonga ukuba i-MBR ikwicandelo lokuqala, imeko enokutshintsha ukuba usebenzise ulwahlulo olwahlukileyo. Kanye apho kuya kufuneka uchaze lo mbandela ukuze ubenakho ukubuyisa ngokufanelekileyo eli candelo le-boot.
Nangona le ndlela inokuba yenye yezona zilula kwaye kulula ukuzisebenzisa, umsebenzisi ngewayekwenzile ikopi yogcino ye-MBR yakhe, egcine le fayile kwinkqubo yedrive (ngokubanzi iC: /).
Ekubambeni esikubeke kwinxalenye ephezulu ungayiqonda indlela elula nelula eya kubonisa ukuphinda ufumane i-MBR eyonakeleyo, eyenziwe lula kuphela kumgca wokuyalela. Ukuba unengxaki yokuqala iWindows ngenxa yokusilela okunje, ngoku unezinye iindlela ezimbalwa ezinokukunceda ukubuyisela ngokulula inkqubo yokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyibuyisa njani i-MBR eyonakeleyo engayi kuvumela iWindows ukuba iqale
Iindlela ezi-3 zokwenza kusebenze ukungongeza okungahambelaniyo kwiFirefox